Moa ve ianao iharan'ny lozam-pisotro misy alikaola sy mitondra fiara any UAE | Orinasa Mpampanoa lalàna
Voarara ny fisotroana loza sy ny fitondrana fiara any UAE ary iray amin'ireo tranga be mpijery indrindra ao amin'ny fanjakana. Mifanohitra amin'ny toeran-kafa, tsy misy fetran'ny alikaola ra ny UAE. Ireo mpanao ratsy dia azo nitazona am-ponja hatramin'ny 48 ora ary koa ny mpitondra moto dia mety hanome santionany amin'ny urina sy rà hamantatra raha misy fambara misy zava-mahamamo. Ny iray dia afaka nalefa tany amin'ny fampanoavana, izay mitaky sazy any amin'ny fitsarana mifototra amin'ny maha-zava-dehibe ny fandikan-dalàna ary hamakafaka ny tantaran'ny heloka bevava an'ny mpamily.
Ireo mpanao ratsy dia tsy maintsy mizara kilasy fiarovana amin'ny làlana alohan'ny hamerenany ny lalana alehanao.
Raha sendra misimisy ny mpamily môtô iray ao ambany fiantsonana, dia mety ho tsy misy na inona na inona ny fiantohana (na tsy nahavita nahatonga izany ratra izany aza izy).
Karazan-java-misotro sy lozam-pifamoivoizana ao UAE
Ny ampahany amin'ny lozam-pifamoivoizana dia misy ifandraisany amin'ny fitondrana fiara mamo. Ny zavatra manosika ihany anefa, dia ny mpamily mamo no hipoitra amin'ny lozam-pifamoivoizana raha tsy mpitondra môtô na ny mpandalo tsy manan-tsiny dia hiaritra fahavoazana be dia be. Ny marina dia, ny sasany amin'ireny fahavoazana ireny dia tena mahafaty ka mety hateraky ny fahafatesany eo no ho eo. Mbola mitohy ny lozam-pifamoivoizana mamo nefa mbola tsy resin'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny andraikitr'izy ireo ny torohevitra fa tsy hiara-mandeha tsara ny fisotroana sy ny familiana.
Maratra ny fisotroan-toaka marobe:
Isan'ny matetika, na izany aza, ny hafainganan'ny fiara. Indraindray, izany dia mitranga rehefa misy mpamily mamo roa mitondra fiara izay samy hafa dia manomboka mifanesoeso amin'ny hoe iza no mpamily lehibe kokoa. Amin'izao fotoana izao dia mety hanomboka hazakazaka amina endriny eo afovoan'ny làlambe na lalambe be olona izy ireo. Tsy ho ela intsony raha ny iray amin'izy ireo no hidona amin'ny fiara tsy manan-tsiny. Mazava ho azy fa ny fialana mampidi-doza dia miaraka amin'ity karazana fiara ity, toa ireny ihany no tena fiara mandeha.
Rehefa tsy mijanona amin'ny jiro mena ny mpamily mamo karazana lozam-pifamoivoizana mamomamo hafa mitranga. Ny familiana amin'ny toetrandro mampidi-doza na dia eo ambany fitarihan'ny fanahy aza dia mety hiteraka fahavoazana amin'ny famelezana fiara mamo. Mazava ho azy fa ny fahaizan'ny mpamily, mitarika ny fahasimban'ny heriny hanao safidy tsara dia ho voan'ny booze.
Karazana lozam-pifamoivoizana hafa dia misy ny fiafarany aoriana sy ny fiafarana mialoha. Raha sendra olona tsy nanan-tsiny niharan'ireto karazana ratra ireto ianao nandritra ny iray ary niaritra fijaliana marobe, dia fahendrena ny mitady toro-hevitra avy amin'ny mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana DUI mba hahafahanao mandray fepetra ara-dalàna hafa mety. . Mikasika ny habetsaky ny ratra nahazo anao, ny mpisolovava anao dia mety mitaky ilay nanao ratsy mba handoavana ny fandaniana hafa ary koa ny fampidiranao hopitaly.
Ny vokatry ny fisotroana loza sy ny lozam-pifamoivoizana ao UAE sy ny mpisolovava voadona manokana dia afaka manampy
The nitombo ny isan'ny mpamono fiara mamohehatra mamo tany UAE dia 175 isan-jato. Ny fahantrana dia miaritra ny ratra lehibe izay tsy ahafahany mikarakara tena ary mila fihodinana, famantaranandro isan'andro amin'ny mpianakavy sy ny mpitsabo mpanampy, miaraka amin'ny fitsaboana fanarenana. Angamba mety hihena hatramin'ny farany ny faharatranao. Mbola miantraika mafy amin'ny fiainanao ny kalitao. Tsy afaka mijery ny andro tsy misy tongotra ianao na fanaintainana miverina.
Rehefa ianao na olona iray tianao, dia mendrika ny tambiny ianao amin'ny fijaliana ary koa ny vokatr'ilay loza teo amin'ny fiainanao. Noho io antony io dia nanolorana anao ho tsotra mifandraisa amin'ny a Mpitsara maratra manokana, indrindra misy mpisolovava manana fahaiza-manao misolo tena ny traboina noho ny ratra mitondra fiara mamo.
Mpanolo-tsaina maratra manokana dia afaka:
Afaka mampiasa mpitsabo, dokotera ary mpamatsy fiantohana ho azo antoka fa mahazo fikarakarana ara-pahasalamana mety ianao, indrindra raha ny orinasa fiantohana te-hanapaka ny zoro araka izay azony atao.
A ny mpisolovava dia manome antoka fa mikarakara ianao amin'ny fotoana ela, ary afaka mahatsikaritra fa voaloa fotsiny ny fanaintainana sy ny mijaly ary ny olon-tianao.
Ny mpisolovava dia afaka ihany koa fantaro hoe iza no onitra anao amin'ny karama very amin'ny ho avy noho ny tsy fahaizanao na ny fahafaha-miasa voafetra miasa.
Voalohany, mpisolovava ratra manokana any UAE, Dubai, Abu Dhabi ary Sharjah dia afaka mandroso ho an'ny zon'ny ary hitady ny rariny ho anao manokana mandritra ny fotoana mikorontana be amin'ny androm-piainanao. Mandritra ny fotoana rehetra, raha tsy ataonao izany, dia tsy manangona vola izy ireo, midika izany fa azonao ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny iray fa tsy misy very.
ny ny mpisolovava dia afaka mahita ny fomba tsara indrindra hahatrarana ny volanao raha toa ka milaza ny mpanao ratsy fa tsy hanana vola be izy handrakofana ny fahavoazana naterany. ny Mpitsara maratra manokana safidy foana ny mitaky fahavoazana avy amin'ny masoivohon'ny fiantohana anao ny mpamily mamo.
Nampitandrina ny mpampanoa lalàna sy ny lozam-pifamoivoizana ny mpampanoa lalàna UAE:
Ny olona tsy tokony hiditra ao ambadiky ny kodiarana aorian'ny fisotroana iray - ny fisotroana toaka kely fotsiny dia heloka bevava.
Nanazava an'Andriamatoa Hafani ny raharaha mahakasika ny firenena samihafa, fa ny ankamaroan'ny olona tsy avy amin'ny firenena Arabo fa tsy Silamo.
Rehefa avy nifandona matetika izy ireo dia hita.
The lalàna milaza fa hita fa mamo ao ambadiky ny kodiarana dia mitaky onitra kely indrindra an'ny Dh20, teboka mainty 24 ao amin'ny fahazoan-danao, 000, ary koa ny fiarenanao mety ho voasambotra mandritra ny 60 andro.
Mba hanakiviana ireo mpamily mpitandro filaminana dia hanao fandehanana tsy ho ela ireo klioba sy trano fandraisam-bahiny.
The mitombo ny fanaraha-maso fanampiny dia mikasa ny hisoroka izay mety ho fitondrantena rehetra izay mety hanelingelina ny fandehan'ny fivezivezena sy fanelingelenana feo, hoy izy nanazava.
Lozam-pifamoivoizana sy mitondra fiara ao amin'ny renivohitra UAE: Miaro tena
Mety tsy ho fantatrao hoe iza no tandindomin-doza, na misotro toaka na maratra mitondra fiara. Tsy voafetra ho an'ny olon-dehibe ihany ny ratra mitondra fiara.
Ny fifandonan'ny môtô dia misy karazana antony manosika azy ireo, fa ireo kosa dia maratra izay azo ialana indrindra amin'ny alàlan'ny fanalavirana ny asanao izay mampidi-doza rehefa miantso ny zavatra toy ny soratra sy ny booze. Aorian'ny fisotroana zava-pisotro vitsivitsy na dia raha tsy takatry ny fisotroana sy ny mitondra fiara aza ianao dia mety hanao zavatra mahagaga.
Ny familiana aorian'ny fisotroana dia voafafa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny mpitondra fiara. Mampalahelo fa misy olona misintona ny kodiarana ary mandika ny lalàna.
Raha vao mianatra ianao dia mila mitondra fiara, ny fitsipika voalohany dia tsy ny misotro. Ity torohevitra ity dia mety hanampy anao tsy hitandrina hisafidy tsy hahomby ary hijanona ho tompon'andraikitra amin'ilay olana:
Omeo fotoana be ny vatanao mba hiverenanao amin'ny fiantraikan'ny alikaola.
Aza mieritreritra fa manana labiera fotsiny ianao dia tsy ratsy ny mandeha fiara, ny zava-pisotro dia zava-pisotro ary koa tsy tokony hitondra fiara aorian'ny fisotroana.
Ataovy fotsiny amin'ny olona tena atokisanao izany. Raha toa ka mikasa ny hisotro ianao, na manafidy azy ireo haka amin'ny sakaizanao miaraka amin'ny namana matotra na ray aman-dreny.
Tazony any anaty kitapom-bolanao ny laharan'ny telefaona findainao ary koa vola vonjy maika.
Ny lozam-pifamoivoizana sy ny fisotroana zava-mahadomelina any UAE dia tsy mametraka ny mpamily ao anaty loza fotsiny fa ny mpandeha an-tongotra sy ny mpamily hafa koa. Aza misotro sy mitondra fiara!
Leave a Comment hanafoana ny Reply
Soraty eto ..
Roger on Lalàna misotro sy mitondra fiara any Dubai na UAE: Tsy maintsy manaraka ny lalàna ny mpamily mba hisorohana ny sazy henjana
Asad Bin Abood on Antsipirihany Do Matter! Fanafody fitsaboana any Dubai, UAE
Ann on Inona no mitranga raha tsy mandoa trosa na carte de crédit ianao any UAE?
Juanitah Ntambi Sarobidy on Karazana tranga 5 momba ny heloka bevava any Dubai sy ny fomba hanampian'ny mpisolovava anao
legalbridge-admin on Ireo karazana fanafihana
Lozam-pifamoivoizana ao Dubai
Miaro ny heloka bevava
Mpisolovava heloka bevava any Dubai
Mpisolovava ao Dubai
orinasa mpanao lalàna any dubai
mpisolovava mpamono olona